IFTIINKACUSUB.COM: Dadka aan isku-kalsooneyni ,waxay been ka sheegaan tariikhdooda.
Dadka aan isku-kalsooneyni ,waxay been ka sheegaan tariikhdooda.
ku dhaaftey oo leh bilow iyo dhamaad xirmey. Jaceylkeeduna wanaag kuma kordhin-karto, naceybkeeduna xumaan kuma nuqsaamin karto.
Waa qoraal tilmaamaya isla-markaas fasiraya tagtada, taas oo qaab aqooneed oo aan dheelliyin kuugu tebineysa xaqiiqooyin iyo xeerar loo kaashado fahamka taaganta.
Dabadeed aad kaga wacyi-qaadato qorsheynta naqshadda aad u dooneyso timaaddadaada.
Waxay leedahay muuqaal sheeko, laakiin gudaheeda waa aragtiyaal, xeerar, tijaabooyin iyo mawaaqif. Dadka aanan isku-kalsooneyn waxay been ka sheegaan taariikhda ay tagtadoodu leedahay, markaas ayay lumiyaan nuxurkii ay lahayd taariikhda.
Taasi waxay sababtaa in facaha danbe ay ku hungoobaan timaaddada wanaagsan oo ay ka rajo-qabeen. Tebinta taariikhda waxay u baahan tahay geesinimo lagu qirto kharaarkeeda iyo macaankeeda.
Tusaale, Khaalid ina Waliid (Eebe haka raali noqdee) wuxuu ahaa ninka aabihiis lagu ceebeeyey quraanka. Isaguna markuu muslimey aayadahaas waa uu ku cibaadeysan jirey, bal dadka uu ku dhex-jirey dhamaantood ayaa akhrin-jirey aayadaha ceebeynaya aabihiis. Waayo waa taariikh xirantey.
Ahmiyadda ay taariikhdu leedahay waxaanu ka garaneynaa kitaabka quraanka ah, 1/3 tirada aayadihiisa (in ka badan 2000 oo aayadood) waxay ka hadlayaan dhacdooyin taariikhi ah.
Taariikh walba sadarradeeda waxaa dhigey fac aadami ah. Haddii facaasi uu dhisey hannaan nololeed ama agab teknolojiyadeed, noloshu waxay ku saxan-tahay waajibna ku ah facaha danbe in ay hor-mariyaan dhaxalka aabayaashood.
Faca aanan xiiseyn taariikhdooda ama khalda, waxay lumiyaan fayiigsiga timaaddadooda, markaas ayay dhaxlaan adaadax iyo adaadun-la´aan.
Ogaalka dhabta ah ee laga helo tagtada, waxay ku siisaa abbaar-qaadasho dhab ah ee taaganta iyo odoros-wanaag dhab ah ee timaaddada.
Sidaa darteed fac aanan taariikhda si sax ah ugu gudbin faca ka danbeeya, si sax ah ugama dhaadhicin karaan taaganta, timaaddadana waa uu ka khaldaa.
Dhacdooyinka maalin-walba aad arkeysid ama aad maqleysid waa natiijo ay dhashay taariikh aadan ogeyn, taas oo haddaadan si sax ah u helin uu kaa lumayo fahamka waxaas kuu muuqda.
Bulshadii dooneysa in ay ka adkaato legdanka ay timaaddada kula-jirto, waxay si sax ah u barataa tagtadeeda dhankeeda ay jecelyihiin iyo dhankeeda ayan jecleyn.
Qof-walba oo taariikhda been ka sheega, ilaah buu been u sheegey oo waa uu denbaabay, naftiisa ayuu been u sheegey oo luggooyo kula kacay, isla-markaas wuxuu ku been-abuurtey dad dhintey oo aanan is difaaci-karin.
Ogow oo casharka ugu hilan culus oo aanu ka faa´iideyno taariikhdayada wuxuu yahay, casharka inoo tilmaamaya in aynaan ka faa´iideysan taariikhdayada.